विश्वका ७१ करोड इमेल आइडी ह्याक, तपाइँको इमेल सुरक्षित छ छैन यसरी थाहा पाउनुहोस् - IAUA
रोचक प्रसंग सूचना-प्रविधि
विश्वका ७१ करोड इमेल आइडी ह्याक, तपाइँको इमेल सुरक्षित छ छैन यसरी थाहा पाउनुहोस्
ramkrishna October 20, 2017	तपाइँको इमेल सुरक्षित छ छैन यसरी थाहा पाउनुहोस्विश्वका ७१ करोड इमेल आइडी ह्याक
साइबर सुरक्षा विज्ञहरुको एक समूहले एउटा भयानक साइबर हमलाको खुलासा गरेको छ । उक्त समूहका अनुसार साइबर हमलाका कारण भएको डाटा लिकबाट ७० करोड भन्दा धेरै इमेल ठेगाना, पासवर्ड तथा फोन नम्बर एक गलत रुपमा कन्फिग्योरेसन गरिएको स्पाम बोटको सहायताले अनलाइनमा लिक गरिएको छ
पेरिसका शोधकर्ता बेनकोवले ७१ करोडभन्दा धेरै इमेल ठेगानावाला एक स्पाम देखे ।
उनले अनलाइनर नामधारी स्माप बोट देखे जसले इमेल प्राप्त गर्ने कम्प्युटरका बारेमा जानकारी एकत्रित गर्नका लागि स्पाम इमेलमा पिक्सेल आकारको तस्वीरको उपयोग गर्दछ ।
यसमार्फत भएको डाटा लिक निकै भयानक भएको अनुसन्धानकर्ताहरुले बताएका छन् ।
एकैचोटी यतिधेरै डाटा लिक भएको घटना यो पहिलो भएको उनीहरुको भनाइ छ । पछिल्लोपटक साइबर हमलाको सिकारमा विश्वभरका हरेक उमेर समूहका इमेल प्रयोगकर्ता रहेका बताइएको छ ।
कतै तपाइँको इमेल त ह्याक भएको छैन ? यसरी चेक गर्नुस !
तपाइँको इमेल एड्रेस डटा लिक भएका इमेलहरुको सूचिमा छ कि छैन थाहा पाउनका लागि तपाइँले रिसर्चर ‘ट्राय हन्ट’ को वेबसाइट HaveIBeenPwnedमा लगअन गर्नुपर्दछ ।
त्यहाँ रहेको बक्समा आफ्नो इमेल एड्रेस टाइप गरेर pwned ? बटन थिचिसकेपछि तपाइँले आफ्नो डाटा सुरक्षित छ कि लिक भएको छ भन्ने थाहा पाउन सक्नुहुन्छ ।
टू फ्याक्टर अथेन्टिकेसन प्रयोग तथा तथा मजबूत पासवर्ड रहेका प्रयोगकर्ता सुरक्षित रहेको ट्राय हन्टले जनाएको छ ।
Previous Previous post: फेसबुकमा यसरी चिन्नुस् ‘फेकन्यूज’ ! फेसबुकले जारी गरेको महत्वपूर्ण जानकारी पढौ
Next Next post: यस्तो भएमा समाप्त हुन्छ त पृथ्वीमा जीवन ! कुन ग्रहमा छ जीवनको सम्भावना ?